Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguTom And Catherine
Yonwabele indawo yethu yokuhlala yangoku kunye nobunewunewu ebekwe entliziyweni yePemberton.
Le ndawo intle yokulala yakhiwe ngenjongo yokuba yonwabele unyaka wonke kwidolophu eyimbali yasePemberton, engaphakathi kumbindi weSouth-Wests Karri Forests.
Sifumane kwi-instagram yohlaziyo kunye nentengiso-willow_on_pine
Ngamagumbi okulala amathathu anobukhazikhazi beKumkani, igumbi elinye labantwana eligcwele iibhedi zamaplanga, amagumbi okuhlambela amabini, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nendawo yokutyela ejonge ukutshona kwelanga eliseMazantsi-ntshona, qiniseka ukuba le ndawo ifanelekile ukuhlala kwakho.
Sibonelela ngayo yonke into onokuthi uyifune ngexesha lakho lokuhlala, kubandakanya izinto zangasese, iti kunye nekofu, imidlalo yebhodi, iiDVD, iNetflix, iWiFi ekhawulezayo, iBBQ, umlilo weenkuni kunye neyadi enkulu engasemva egcwele isitulo esihle sokujingiza ukuze uhlale phantsi kwaye uphumle.
4.94 ·Izimvo eziyi-36
Ime kanye kumbindi wedolophu eleleyo yasePemberton, uya kuba ngumgama omfutshane ukusuka kwidama leBig Brooke, umgama omfutshane ukusuka kwiqula lokuqubha elinomphetho weKarri, kunye nokulahla amatye kude neBar yeWhisky eyaziwayo kunye neRestaurant, iJaspers.
Ngaphakathi kwipropathi uya kufumana incwadi yesikhokelo ebanzi yokubonisa yonke into enikwa nguPemberton, kubandakanya iiwayini, iindawo zokutyela, iindledlana, iindunduma, iilwandle, amahlathi, izilwanyana zasendle kunye nohambo.
Umbuki zindwendwe ngu- Tom And Catherine
Ungaqhagamshelana nomphathi wepropathi yethu ngefowuni ukuba unayo nayiphi na imibuzo.
UTom And Catherine yi-Superhost